MMiN | MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK
minkhaung77 ♦ December 13, 2013 ♦ Leaveacomment
တနေ့မှာ အဲဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ ခဏခဏ ဖုန်းဝင်လာတယ်… ခါတိုင်းနဲ့မတူတာက ဖုန်းမကိုင်မချင်းကို ခေါ်နေတော့တာဘဲ…နောက်ဆုံးတော့လဲ ကျနော် ဖုန်းကို လက်ခံပြီးနားထောင်လိုက်တယ်…
“ဖေဖေ မြန်မြန်ပြန်လာတော့လေ… မီးမီး ဖေဖေ့ကို သတိရတယ်… မေမေက ပြောတယ်… ဒီဖုန်းနံပါတ်မမှားဘူးတဲ့… ဖေဖေ ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဘဲတဲ့… မီးမီး အရမ်းနာနေတယ်…မေမေကပြောတယ်… ဖေဖေက အလုပ်အရမ်းများနေတယ်တဲ့… သမီးကို မေမေ တစ်ယောက်တည်းဘဲ ပြုစုနေတာ … မေမေလဲ တော်တော်လေးပင်ပန်းနေပြီ…
ကလေးလေးရဲ့ ရိုးသားလှတဲ့တောင်းဆိုမှုလေးကို ကျနော် မငြင်းဆန်နိုင်ခဲ့ဘူး…ဖုန်းနားကို ကပ်ပြီး မွက်မွက် ဆိုပြီး မွေးမွေးပေးလိုက်တယ်…
သမီးလေးရဲ့ ကံကြမ္မာ မကောင်းရှာဘူး… မွေကတည်းက မွေးရာပါ အရိုးကင်ဆာ ပါလာတယ်… သူ့ဖေဖေကလဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းကမှ ကား တိုက်မိလို့…ဆုံးသွားတာ မကြာသေးဘူး… ဒီကိစ္စ သူ့ကို ပြောပြဖို့ ကျမမှာ အင်အားမရှိဘူး…နေ့တိုင်း ဆေးတွေထိုးရတာ အမြဲတမ်းလိုလို နာကျင်နေပြီ… သမီးလေးလဲ ဒီဒဏ်ကို တော်တော်လေးခံနေရပြီ…
နာကျင်မှုဝေဒနာ အဆိုးဆုံး အချိန်တွေမှာ သူ့ပါးစပ်ကနေ တတွတ်တွတ် အော်နေတာကတော့ အရင်က သူ့အနားမှာ သူ့ကို သတ္တိ ရှိဖို့ အမြဲတမ်း အားပေးနေတဲ့ သူ့ဖေဖေ ပါဘဲ…ကျမလဲ မကြည့်ရက်တော့လို့ ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုပေးလိုက်တာ အစ်ကိုရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်နေတာပါ”
“သမီးလေး လူ့ဘ၀ကနေ ထွက်သွားပါပြီ… အစ်ကို အဲဒီ အချိန်တုန်းက သူ့ကို ဖုန်းထဲကနေ အနမ်းလေးပေးလိုက်ပုံရတယ်… ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား… ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက ပြုံးပြီး ထွက်သွားတာပါ…
HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၆၆ )
Management Succession Planning ဆိုတာအခြေခံအကျဆုံးမေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုနိုင်ဖို့ အတွက် အဖွဲ့ အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ အရည်အသွေးရှိတဲ့ Talent တွေကို Assessing နဲ့ Auditing လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ပထမဆင့်ကတော့ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ လုံလောက်တဲ့ဆက်ခံသူ ( Successors ) တွေရှိရဲ့လားဆန်းစစ်ဖို့ပါ။ ဆိုလိုတာက ရေရှည်မှာ အဓိကကျတဲ့ရာထူးတာဝန်နေရာတွေကို တာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူ တွေ အလုံအလောက်ရှိရဲ့လားကိုပြောချင်တာပါ။
တတိယအဆင့်အနေနဲ့ သူတို့ဟာအနာဂတ်မှာလိုအပ်လာတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေ၊ Competency တွေရှိရဲ့လားဆို တာပါ။
အဲဒီ အလားအလာရှိတဲ့ဆက်ခံသူလောင်းလျာ ( Successors ) တွေကို သူတို့တွေရဲ့ ရာထူးတာဝန်တိုး တက်မှုလမ်းကြောင်းအဆင့်ဆင့်မှာ ( က ) တဆင့်မြင့်ရာထူး ( ဥပမာ လက်ထောက်မန်နေဂျာမှ မန်နေဂျာရာထူး သို့ ) အတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်သူများ – ( ခ ) နောင်လာမည့် ၂ နှစ် ခန့်အတွင်းတွင်မှသာ နောက်တဆင့်မြင့်ရာ ထူးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်မည့်သူ ( ၃ ) ရာထူးတူအခြားလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုအတွက် ပြောင်းလဲတာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန်အသင့်ဖြစ်သူ ( စီမံမန်နေဂျာမှ HR မန်နေဂျာ သို့မဟုတ် HR မန်နေဂျာမှ Marketing မန်နေဂျာစသည် ) ( ၄ ) လက်ရှိရာထူးတာဝန်မှလွဲ၍ အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်တစ်ခုအတွက်မှအသင့်မဖြစ်သူဆိုပြီး ခွဲခြားလို့ရနိုင်ပါ တယ်။
Succession Planning ကို ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်နဲ့ရရှိနိုင်မှုခန့်မှန်းချက်အချက်အလက်များ၊ Talent Audit နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလားအလာဆန်းစစ်ချက်များကို အခြေခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အ ရွယ်အစားကြီးမားတဲ့အဖွဲ့ အစည်းတွေမှာဆိုရင် ဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်နဲ့ရရှိနိုင်မှုကိုအတိအကျတွက်ချက်နိုင်ပြီး ပုံမှာပြသထားသလို အသေ အချာရေးဆွဲထားတဲ့ Management Succession Schedule ကိုအခြေခံတဲ့ ရာထူးဆက်ခံမှုအစီအစဉ် ( Succession Planning ) တွေရှိကြပါတယ်။
ပုံ – Management Succession Schedule
ဒါပေမယ့် သမားရိုးကျ Succession Planning ဟာအလျင်အမြန်ပြောင်းလဲနေတဲ့ အချိန်ကာလကြီးမှာ အချိန်နဲ့တပြေးညီမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီလိုအခါမျိုးမှာ Talent Management လုပ်မယ်၊ Management Development Process လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်အရည်အသွေးရှိတဲ့ Talent People တွေက သိပ်အကြာကြီးမ စောင့်ချင်ကြတော့ပါဘူး။
Talent Management အကြောင်းစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါ Career Management အကြောင်းဆက် ပြီးကြည့် ကြရအောင်။
Career Management ဆိုတာကတော့ Talent Management နဲ့တူသလိုရှိပေမယ့် သီးခြားစဉ်းစားပေး ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Career Management ဆိုတာဘာလဲ၊ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြရ အောင်။ နောက်ပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွင်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အဆင့်တွေ Career Planning ရဲ့ Framework နဲ့ Career Progression နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Dynamics တို့ကိုလဲသိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Career Management ၏အဓိပ္ပါယ်
Career Management ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် Talent တွေမွေး ထုတ်ပေးနိုင်ဖို့နဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ရည်မှန်းချက်၊ လိုလားချက်တွေပြည့်ဝစေဖို့ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ စွမ်းဆောင် ရည်နဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေကိုကြိုတင်သတ်မှတ်ပေးခြင်းနဲ့ သက် ဆိုင်ပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းရဲ့လိုလားချက်ကို ပေါင်းစည်းညှိနှိုင်းပေးတာဖြစ်ပါ တယ်။ Career Management ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းက Career Planning ဖြစ်ပါတယ်။ Career Planning ဆို တာ အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ကို ဆန်းစစ်ချက်များ၊ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုမှတ်တမ်းများ၊ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ လိုလား ချက်များနဲ့ သူတို့ရဲ့အလားအလာတို့နဲ့အညီ ပုံဖော်ပေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းကို သူ တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေဖို့အတွက် ဆွေးနွေးပေးတာနဲ့လဲသက်ဆိုင်ပါတယ်။
Career Management ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လိုအပ်လာမယ့်အရည်အသွေးရှိဝန်ထမ်းများ ( Talent ) ကိုဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ Talent Management မူဝါဒရဲ့ဦးတည်ချက်ကို ရောက်ရှိ နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေအတွက် Career Management မူဝါဒရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ( ၁ ) ယင်း တို့အား တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အရည်အသွေးတွေ၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်တဲ့ အောင်မြင်တဲ့လုပ် ငန်းကိုင်ငန်းကောင်းရရှိဖို့နဲ့ သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အလားအလာကို အပြည့်အဝသုံးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ လမ်းညွှန်မှုတွေ၊ ပံ့ပိုးဖေးမမှုတွေ၊ အားပေးမှုတွေပေးစွမ်းနိုင်ဖို့၊ ( ၂ ) သူတို့အစွမ်းအစနဲ့ရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့ ရာ ထူးအဆင့်တစ်ခုမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့်တာဝန်ယူရမှုတွေအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေဖို့လိုအပ်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ၊ သင်ယူမှုတွေကိုရရှိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Career Management မှာဆိုရင် အဖွဲ့အစည်းရဲ့လိုအပ်ချက်ရော၊ ဝန် ထမ်းအတွက်ရောပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအခွင့်အလမ်းတွေကို ဖန်တီးပေးနိုင် ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာလဲ တီထွင်ဆန်းသစ်နိုင်စွမ်းရှိဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ Career Management မူဝါဒနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေရေးဆွဲရာမှာ Career Progress အဆင့်ဆင့်ကိုအခြေခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။
HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၆၅)
Talent Management မဟာဗျူဟာတစ်ခု ဖော်ထုတ်ခြင်း
Talent Management မဟာဗျူဟာတစ်ခုတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သောလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခု လုံး၏ဦးတည်ချက်တို့ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မည်ကဲ့သို့ချိတ်ဆက်သွားအောင်လုပ်ဆောင်သွားမည် ကိုရှုမြင်သုံးသပ် ချက်များပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏ဦးတည်ချက်တွင် အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသော မူဝါ ဒနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအသုံးပြုပြီး Talent ရှိသောဝန်ထမ်းများ အားလိုအပ်သည့်အချိန်တွင်ရရှိနိုင်အောင် အတွက်မည်သို့ ရှာဖွေသွားမည် သို့တည်းမဟုတ်ပျိုးထောင်သွားမည်တို့ပါဝင်သည်။ ယင်းမဟာဗျူဟာတွင် အောက်ဖော်ပြပါဦးတည်ချက်တို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးဖြစ်ရမည် –
Talent Management ၏ဦးတည်ချက်များ
( ၁ ) Talent Management အစီအစဉ်တွင်မည်သူတို့ပါဝင်သင့်ကိုဆုံးဖြတ်ခြင်း
( ၂ ) ကျွမ်းကျင်မှု ( Skills ) နှင့်အလားအလာ ( Potential ) စံနှုန်းများကိုအခြေခံပြီး Talent ၏အဓိပ္ပါယ် သတ်မှတ်ခြင်း
( ၃ ) အဖွဲ့အစည်း၏အနာဂတ် Talent လိုအပ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းအား ကောင်းမွန်သောလုပ်ငန်းခွင် ( A Great to Work ) နှင့် ရွေးချယ်စရာလုပ် ငန်းရှင်ကောင်း ( Employer of Choice ) အဖြစ်ဖော်ဆောင်ခြင်း
( ၄ ) အမှန်တကယ်အရည်အသွေးရှိပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်အလုပ်လုပ်ပေးသွားမည့်၊ သင့် တင့်လျောက်ပတ်သည့်ကာလတစ်ခုကြာမြင့်သည်အထိ အလုပ်လုပ်ပေးသွားမည့် ဝန်ထမ်းများကိုသာ ရွေးချယ် ခန့်ထားနိုင်ရန်အတွက် စနစ်ကျနသည့် ဝန်ထမ်းရွေးချယ် ခန့်ထားရေးနည်းလမ်းများ၊ နည်းစနစ်များအသုံးပြုခြင်း ( သို့ရာတွင် ဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး အဖွဲ့အစည်းအတွက် အလုပ်လုပ်ပေးသွားမည်ဟူ၍ကား မျှော်လင့်၍မ ရနိုင်ပါ။ )
( ၅ ) ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ယင်းတို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများအသုံးချနိုင်စေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်လာစေမည့်အခွင့် အလမ်းများ ရရှိလာစေရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် စိန်ခေါ်မှုများပြည့်နှက်နေစေ မည့် Job Design များနှင့် Role များဖော်ထုတ်ပုံစံပြုသွားရန်၊
( ၆ ) အရည်အသွေးနှင့်အလားအလာရှိသောဝန်ထမ်းများ ( Talent Staff ) အား အလုပ်အကိုင်တိုးတက်မှုရှိ စေရန်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိစေရန် အခွင့်အလမ်းများပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
( ၇ ) အဖွဲ့အစည်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်လိုအပ်သည့် ပံ့ပိုးမှုများကြောင့် မိမိတို့လိုလားသော ကောင်းမွန်သော Job နှင့် Role ရရှိလာစေမည့် လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုဖန်တီးပေးခြင်း
( ၈ ) အလုပ်နှင့်ဘဝ မျှတမှု (Work Life Balance) ရှိစေရန်ဖန်တီးပေးခြင်း
( ၉ ) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုခံစားရစေခြင်း
( ၁ဝ ) Line မန်နေဂျာများ၏ ခေါင်းဆောင်မှုအရည်အသွေးများတိုးတက်လာစေခြင်း
( ၁၁ ) အရည်အသွေးနှင့်အလားအလာရှိသူများ ( Talent People ) အားချီးမြှောက်ခြင်း
( ၁၂ ) အရည်အသွေးနှင့်အလားအလာရှိသူများ ( Talent People ) နှင့် အဖွဲ့အစည်းမှ ထွက်ခွာသွားမည့်သူ များအားဖော်ထုတ်နိုင်ရန် Talent Audit ပြုလုပ်ခြင်း
( ၁၃ ) အနာဂတ်တွင်လိုအပ်လာမည့် အရည်အသွေးနှင့်အလားအလာရှိသူများ ( Talent People ) ဖော်ထုတ်ပြီး မည်သည့် Management Developments လုပ်ဆောင်ချက်များ လိုအပ်သည်ကိုညွှန်ပြပေးနိုင်မည့် Succession Planning လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကျင့်သုံးခြင်း
၂ဝဝ၆ ခုနှစ်မှာ CIPD က အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ Talent Management Checklist ကိုဖော် ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အချက်တွေကတော့ –
CIPD ၏ Talent Management Checklist
( ၁ ) Talent နဲ့ Talent Management ကိုဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မလဲ။
( ၂ ) ပညာရှင်တွေနဲ့ စပါယ်ရှယ်လစ်ဝန်ထမ်းတွေဟာ Talent Management လုပ်ငန်းစဉ် ထဲမှာဘယ်လိုအံဝင် ခွင်ကျဖြစ်မလဲ။
( ၃ ) မိမိရဲ့ Talent Management Task တွေအပေါ်မှာ ပြင်ပလောကရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့အလုပ်သမားဈေးကွက် က ဘယ်လိုလွှမ်းမိုးတာလဲ။
( ၄ ) Talent Pipeline Program အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ မိမိတို့ကိုစိန်ခေါ်နေတဲ့ အချက်တွေကဘာတွေလဲ။
( ၅ ) အဲဒီအချက်တွေကိုဘယ်လိုကျော်လွှားကြမလဲ။
( ၆ ) Talent လို့ဆိုရာမှာ ( ဥပမာအားဖြင့်အလားအလာဆိုပါစို့ )ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ပြီးဘယ်လိုတိုင်းတာမှာ လဲ။
( ၇ ) တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကောနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်တာမျိုးလုပ်ဖြစ်ရဲ့လား။
( ၈ ) Talent Management နဲ့ ဆက်ခံခြင်း ( Succession Planning ) လို တခြား HR လုပ်ငန်းတာဝန်တွေထဲ မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့သူတွေကို သေချာရှင်းလင်းပြောပြထားရဲ့လား။
( ၉ ) အလားအလာတွေနဲ့ ဝန်ထမ်းများရဲ့အလုပ်အပေါ်သဘောထားတွေကို ဖော်ထုတ်ရာ မှာဘယ်လို Tools တွေကိုသုံးမလဲ။
( ၁ဝ ) Talent Management မှာပါဝင်တဲ့သူတွေကို စွမ်းဆောင်ရည်ဒါမှမဟုတ်အလားအလာ ( Potential ) နဲ့ ပတ်သက်ပြီးထိရောက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးနိုင်စေဖို့နဲ့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာတွေကို သင်ကြားပေးဖို့၊ အားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးပြီလား။
( ၁၁ ) မိမိရဲ့ Talent Management လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ထိရောက်မှုကိုဘယ်လိုတိုင်းတာမလဲ။
( ၁၂ ) အဖွဲ့အစည်းအတွက် Talent Management ဘယ်လောက်အကျိုးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာကို ဘဏ္ဍာရေးနဲ့ အခြားသောအကျိုးအမြတ်များကိုတွက်ချက်မှုအပါအဝင် စနစ်တကျဘယ်လိုမျိုး ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်သွားမှာလဲ။
Talent Management မဟာဗျူဟာရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်မယ်ဆိုရင် ထိပ်ပိုင်းစီမံခန့်ခွဲသူများနဲ့ အကြီးတန်းမန်နေဂျာမျာ။၊ HR တာဝန်ရှိသူများရဲ့အရည်အသွေးပြည့်ဝတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ခေါင်းဆောင်မှုတွေ လိုအပ် ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ သန္နိဌာန်ချမှတ်မှုနဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ချဉ်းကပ် နည်းများမှာလဲ ဌာနတွင်းမှသူများကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ကို အဓိကထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Talent Development ဟာ Business Strategy ရဲ့မရှိ မဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Competencies နဲ့အရည်အသွေး ( Qualities ) ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရှိဖို့၊ ဘဝတက်လမ်းဟာလဲ သေချာသတ်မှတ်ပြီးသားဖြစ်ဖို့၊ အနီးကပ်ကြီးကြပ်သွန်သင်မှုကို ထိထိရောက်ရောက်လုပ် ဆောင်ဖို့နဲ့ အရည်အသွေးပြည့်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအဓိက ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ဖို့လဲအရေးကြီးပါတယ်။
Talent Management Information System ရဲ့အဓိကအကျဆုံးအချက်ကတော့ အင်တာနက်ကိုအခြေ ခံတဲ့ ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဆော့ဝဲထုတ်လုပ်သူတွေအနေနဲ့ Talent Management ရဲ့ အပိုင်း ကဏ္ဍအမျိုးမျိုးအတွက် အသုံးချနိုင်ဖို့ရာထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် – Training ကို Tracking ပြုလုပ် ဖို့၊ Succession Planning အတွက် Chart တွေရေးဆွဲဖို့၊ စွမ်းဆောင်ရည်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုတဲ့ Performance Appraisal ကို အွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်နိုင်ဖို့စသဖြင့်ပါ။ ဒါပေမယ့်အဲဒီစနစ်အားလုံးဟာသီးခြားစီသုံးစွဲတာထက် ပေါင်းစပ်အသုံးပြုတာကပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
ပထမအရေးအကြီးဆုံး လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်ကတော့ ဘယ်အလုပ်အတွက်ကိုဦးစားပေးပြီး Talent Management လုပ်ဆောင်မှာလဲဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာဆိုရင် Talent Management ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မဆောင်ရွက်ဘဲ CEO ဒါမှမဟုတ် အမှုဆောင်အရာရှိတွေအပေါ်မှာပဲ အာ ရုံထားလုပ်ဆောင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ အခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေကတော့ အကြီးတန်းမန်နေဂျာတွေ၊ အလယ်အ လတ်တန်းမန်နေဂျာတွေနဲ့ တခြားသောအဓိကကျတဲ့ရာထူးနေရာတွေအတွက်ဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်။
HR လားဟေ့ဝင်ခဲ့လေကွယ် ( ၆၂ )
( ၁ ) Post-Measure – Training တစ်ခုဘယ်လောက်ထိရောက်သလဲဆိုတာ တိုင်းတာဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး လို့ပြောလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ Training တစ်ခုပြီးသွားတဲ့အခါကျမှ စီမံခန့်ခွဲသူများဖြစ်စေချင်တဲ့၊ လို လားတဲ့ပုံစံအတိုင်း ဖြစ် / မဖြစ်ကိုဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ တစ်ခုလောက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင် – မန်နေ ဂျာတစ်ယောက်ရဲ့လက်အောက်မှာ ကွန်ပြူတာစာရင်းရေးသွင်းမှုကိုပိုမိုမြန်ဆန်ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုအပ်နေတဲ့ ဝန် ထမ်းအယောက် ( ၂ဝ ) ရှိတယ်ဆိုပါစို့။ တစ်ရက်တာကြာမြင့်တဲ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှု ( Training ) တွေပြု လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ပိုမိုမြန်ဆန်လာမှုကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီဝန်ထမ်းအားလုံးဟာ သင် တန်းပြီးလို့အဲဒီလိုမျိုးစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ အရင်ကထက်ပိုပြီးမြန်ဆန်လာတယ်ဆိုရင် ပေးလိုက်တဲ့ Training ဟာ အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောနိုင်ပါသလား။ ခက်ပါတယ် ။ တကယ်တော့ သူတို့ဟာနဂိုကတည်းကိုက အဲဒီလို မျိုး ကျွမ်းကျင်ပြီးသားသူတွေဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အခြားသောအကြောင်းတွေကြောင့်သာ ကြိုးစားချင်စိတ်မရှိလို့ လုပ် မပြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ Training တစ်ခုပေးပြီးချိန်မှာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးရရှိလာတဲ့ရလာဒ် တစ်ခုဟာ အဲဒီ Training ကြောင့် ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးပြောဖို့မလွယ်ပါဘူး။
Pre / Post Measure
အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အကဲဖြတ်နည်းကို တမူကွဲပြားစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီး Training မပြုလုပ်ခင်ကတည်းက ကြိုတင် စစ်ဆေးတာကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ မန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ Training မပြုလုပ်မီနဲ့ပြုလုပ်ပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Training ကြောင့် ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုတွေ တွေ့လာရသလဲဆိုတာ သိနိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပြောစရာတစ်ခုကျန်ပါသေးတယ်။ တကယ်လို့ စာရင်းရေးသွင်းမှုပိုမိုမြန်ဆန် လာခဲ့ တယ်ဆိုရင် အဲဒီလိုပိုပြီးမြန်လာတာဟာ Training ကြောင့်လား ဒါမှမဟုတ် သူတို့ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးနေတယ် ဆို တာသိလို့လားဆိုတာမေးစရာရှိပါတယ်။ သာမန်အားဖြင့်လူတွေဟာ သူတို့ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးနေတယ်၊ စောင့် ကြည့် နေတယ်ဆိုရင် ပိုပြီးလုပ်ပြတတ်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အကဲဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းတစ်ခုကိုကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်လည်း ရှေ့ကကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ အခက် အခဲတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ မန်နေဂျာအနေနဲ့ Training ပေးခဲ့ တဲ့ ဝန်ထမ်းအယောက် ( ၂ဝ ) အပြင် Training ပေးဖို့စီစဉ်မထားတဲ့ အခြားသောဝန်ထမ်းအုပ်စု တစ်စုကိုပါ Training မပြုလုပ်ခင်မှာ သူတို့ရဲ့ အချက်အလက်ရေးသွင်းမှုအမြန်နှုန်းကို စမ်းသပ် စစ်ဆေးမှုလုပ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီအုပ်စုကို Control Group လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုပြုလုပ်ပြီး Training ပြီးသွားလို့ Training ရထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စာရင်းရေးသွင်းမှု အမြန်နှုန်းဟာ Training ပေးမထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေထက် သိသိသာသာပိုပြီးမြန်ဆန်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ Training ဟာထိရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ Training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြောပြီးခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန် တော်တို့ ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားခဲ့ကြပြီးပြီ။ သူတို့ကို ဘယ်လိုမျိုးလစာနဲ့ ခံစား ခွင့်တွေပေးမလဲဆိုတာလဲပြောခဲ့ကြပြီးပြီ။ သူတို့ရဲ့ အရည်အသွေးတွေ တိုးတက်လာဖို့အတွက် ဘယ်လိုမျိုး လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုတွေပြုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုလဲပြောခဲ့ကြပြီးပါပြီ။ အဲဒါနဲ့လုံလောက်ပြီလားလို့မေးရင် မ လုံလောက်သေးဘူးလို့ပဲ ပြန်ဖြေရပါ လိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင်ဘာဆက်လုပ်ဖို့ကျန်ပါသေးလဲ။ ဆက်ကြည့်ကြရအောင်။
အားလုံးကြားဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ Talent Management ဖြစ်ပါတယ်။ Talent Management ကိုအာရုံစူးစိုက်လာတာသိပ်မကြာသေးပါဘူး။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ Talent Management ကိုဂရုစိုက်လာကြရ တာလဲ အကြောင်းရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုများပြားတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ အစွမ်းအစနဲ့ အရည် အ ချင်းရှိတဲ့လူတွေရှားလာတာ၊ အဲဒီလူတွေရရှိဖို့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေပိုမိုပြင်းထန်လာတာတွေဟာ Talent Management ကိုအာရုံစူးစိုက်လာခြင်းရဲ့အဓိက အကြောင်းရင်းတွေထဲက အချက်တချို့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလဲ အာဆီယံလွတ် လပ်သောကုန်သွယ်မှု ဇုန် ( AFTA – ASEAN Free Trade Area) ၊ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်း ( AEC – ASEAN Economic Community ) တွေအကောင်အထည်ဖော်လာတာနဲ့အမျှ နိုင်ငံတကာကကုမ္ပဏီတွေ အ များကြီး ဝင်လာကြမှာပါ။ အဲဒီအခါကျရင် သူတို့တွေက ကျွန်တော်တို့ဆီက အတော်ဆုံးဝန်ထမ်းတွေကို လစာနဲ့ ခံ စားခွင့်တွေအများကြီးပေးပြီးဆွဲခေါ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတွေကတော့ အရည် အချင်းမပြည့်ဘူးလို့ သူတို့ယူဆပြီးထားခဲ့ကြတဲ့သူတွေနဲ့သာဆက် ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အလွယ်တကူနဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီတွေကို အလွယ်တကူနဲ့ အနိုင်ယူသွားကြပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့က လစာနဲ့ခံစားခွင့်တွေပိုပေးတဲ့သူတို့ကိုအပြစ်တင်နေရုံ၊ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုသွား ပြီး အပြစ်တင်ရုံနဲ့ ပြဿနာက ပြီးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါဆိုရင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့လိုလာပြီပေါ့။ ဘယ်လိုများကြိုတင်ပြင်ဆင်ရမှာပါလိမ့်။ အဖြေကတော့ Talent Management ပေါ့။ အကယ်၍ ကိုယ့်ဆီကလူတော်တွေပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ရင်တောင်မှ စနစ်ကျတဲ့ Talent Management Program ကို တည်ထောင်ပြီးသားဆိုရင်အများကြီး ခံသာပါလိမ့်မယ်။ ကြည့်ကြရအောင်။ သမားရိုးကျကြည့်ရင်တော့ ဝန်ထမ်းတွေကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် စီစဉ်ဆောင်ရွက် ပေးတာဟာ HR ရဲ့ တာဝန်ဝတ္တရားပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ပိုပြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ပို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ Talent Management ဟာ HR ဌာနရဲ့အဓိကဦးစားပေးအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ Talent Management ဆိုတာ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဓိကအကျဆုံးအရေးအပါဆုံးလူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်တာ၊ တိုးတက်စေနိုင်တာနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Talent Management ကိုအဖွဲ့အစည်းရဲ့ မဟာဗျူဟာမြောက်အစီအစဉ် တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Talent Management ရဲ့အဓိကကျတဲ့ အချက်တွေကတော့
( က ) ဝန်ထမ်းတွေကိုတန်ဖိုးထားဆက်ဆံတတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့အလေ့အထ ဖန်တီးထိန်းသိမ်းဖို့
( ခ ) အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂတ်မှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့ အဲဒီလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းနိုင် ဖို့ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာ ဖော်ထုတ်သွားဖို့
( ဂ ) အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့်အတွက် အရည်အချင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုရံ ထားနိုင်ဖို့်
( ဃ ) အဲဒီ အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ HR လုပ် ဆောင်ချက်တွေဖော်ထုတ်စီမံခန့်ခွဲရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်သွားဖို့တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
TALENT MANAGEMENT ၏သဘောသဘာဝ
Talen Management ကို တံတားတစ်စင်းလို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ ပုံမှာပြထားသလိုပါပဲ။ Talent Management ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ရွေးချယ်ခန့်ထားလိုက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ အရည်အချင်းပြည့်ဝစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဖြစ် အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့် နည်းလမ်းတွေအဖြေ တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးပါတယ်။ Talent Management လုပ်ဆောင်ချက်တွေမှာ Training ဆိုတဲ့ လေ့ကျင့်သင် ကြားပေးခြင်း၊ Individual Career Planning နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ချက်များပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေအပြင် Succession Planning ဆိုတဲ့ အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ အဲဒီနေရာတွေကိုဝင် ရောက်နေရာယူနိုင်မယ့်သူတွေ ဖော်ထုတ်ပေးဖို့လဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Talent Management လုပ်ငန်းစဉ်တ လျှောက်လုံးမှာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်စီမံခန့်ခွဲခြင်း ( Performance Management ) ဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာက ပါဝင်နေပါတယ်။
Fig: Talent Management Bridge
minkhaung77 ♦ September 30, 2013 ♦ Leaveacomment
တခါတုံးက အလွန်ကြွယ်ဝချမ်းသာပြည့်စုံစွာ နေနေရပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ ရောင့်ရဲခြင်းမရှိတဲ့ ဘုရင်တပါးရှိတယ်။
တနေ့တော့ သူဟာ သူ့နန်းတော်အတွင်း လှည့်လည်ကြည့်ရှုနေတုံး သီချင်းလေးတအေးအေးနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ သူ့ရဲ့အမှုထမ်း တစ်ယောက်ကို သွားတွေ့တော့ အဲ့ဒီမြင်ကွင်းက သူ့ကို အလွန်စိတ်ဝင်စားစေတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ သူလဲ အဲ့ဒီသူအနားကို သွားပြီး “ဘာလို့ အဲ့လောက်တောင်များ စိတ်အေးလက်အေး ပျော်ရွှင်နေနိုင်သလဲ” လို့ မေးသတဲ့ ။
အဲ့ဒီတော့ အမှုထမ်းက “အရှင် .. ကျွန်တော်မျိုးက သခင့်အမှုထမ်းပါ။ ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားလူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူး ။ ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ ကျွန်တော့်မိသားစုအတွက် အများကြီးမလိုပါဘူး။ အမိုးအကာလုံခြုံတဲ့နေရာလေးတစ်ခုနဲ့ အစာအိမ်ကို ဖြည့်တင်းပေမဲ့ လုံလောက်တဲ့ အစားအစာတွေရှိနေရင် ပြည့်စုံပါတယ်” တဲ့ ။
ဘုရင်ဟာ အမှုထမ်းရဲ့စကားကို အကျေနပ်ကြီးမဟုတ်တော့ သူ့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအမတ်ကို အဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြတော့ အမတ်ကြီးက “အရှင်မင်းကြီး ..ခုန အမှုထမ်းဟာ ကိုးဆယ်ကိုးအသင်းဝင် (99 Club) တစ်ယောက် မဖြစ်သေးလို့ပါ” တဲ့ ။
အမတ်ကြီးရဲ့ ကိုးဆယ်ကိုးအသင်းဝင် ဆိုတဲ့စကားကို ကြားတော့ ဘုရင်က အလွန်အံ့အားသင့်သွားပြီး ဆက်လက်မေးမြန်းတယ်။
“အရှင်မင်းကြီး ..ကျွန်တော်မျိုး ရွှေဒင်္ဂါးပြား ကိုးဆယ်ကိုးပြားကို ထုတ်ပိုးပြီး အမှုထမ်းရဲ့ အိမ်ရှေ့တံခါးဝမှာ သွားထားပြီးရင် အရှင်မင်းကြီး
သိလာပါလိမ့်မယ်” လို့ အမတ်ကြီးက လျှောက်ထားတယ် ။
နောက်တနေ့ရောက်လို့ သူ့အိမ်ရှေ့က ရွှေဒင်္ဂါးပြားထုပ်ကိုလဲတွေ့ရော အမှုထမ်းက ဝမ်းသာအားရနဲ့ အိမ်ထဲကိုယူသွားပြီး ဒင်္ဂါးပြားတွေကို စရေတွက်တော့တာပဲ ။ ကိုးဆယ်ကိုးပြားပဲရှိတဲ့ ဒင်္ဂါးပြားတွေကို သူ ရေတွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ “မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဘယ်သူမှ ကိုးဆယ့်ကိုးခုတော့ မထားလောက်ပါဘူ။ နောက် ဒင်္ဂါးတစ်ပြား ရှိကိုရှိရဦးမယ်” ဆိုပြီး သူဟာ နေရာအနှံ့ရှာတော့တာပဲ ။ နောက်ဆုံး ခြေကုန်လက်ပမ်းကျပြီး မောကြီးပန်းကြီးနဲ့ အိမ်က လူတွေကိုပါ ဆူပူမာန်မဲ ရှာခိုင်းတယ်။
မတွေ့တော့တဲ့အဆုံးမှာ သူက အဲ့ဒီဒင်္ဂါးတစ်ပြားကို သူ့လုပ်အားနဲ့ မရရအောင် ဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီး ခါတိုင်းထက် နှစ်ဆပိုလုပ်၊ အိမ်က လူတွေကိုလဲ အရင်လိုကောင်းကောင်းစကားမပြော၊ အလုပ်ထဲမှာလဲ စိတ်အေးလက်အေးမရှိနဲ့ အပြောင်းလဲကြီး ပြောင်းလဲသွားတယ်။
အဲ့ဒါကို မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဘုရင်ကြီးက သူ့ရဲ့အသွင်ပြောင်းမှုကို အံ့သြတကြီးဖြစ်ပြီး အမတ်ကြီးကို မေးပြန်တယ် ။
အဲ့ဒီတော့မှ အမတ်ကြီးက “အရှင်မင်းကြီး .. အမှုထမ်းဟာ အခုတော့ ကိုးဆယ်ကိုးအသင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီ”.. နောက် .. သူကဆက်ပြီး ရှင်းပြတယ် ။
ဘာလို့ ကိုးဆယ်ကိုး အသင်းဝင် လို့ ခေါ်ဆိုရသလဲဆိုတော့ “တချို့တချို့လူတွေရဲ့ဘဝဟာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေနိုင်ဖို့ရာ လုံလောက်ပြည့်စုံတဲ့ အနေအထားတစ်ခုရှိနေပေမဲ့ ဘယ်တော့မှ မရောင့်ရဲနိုင်သေးပဲ ကျန်တဲ့ အပိုတစ်ခုနောက် အသဲအသန်လိုက်ရင်း ပင်ပန်းဆင်းရဲနေရတဲ့သူ တွေကို ဆိုလိုတာပါ” တဲ့။
ဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်သလောက်နဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲ ပျော်ရွှင်နေနိုင်ပါတယ် ။ ကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်မှုတွေ များများစားစား ရလာတာနဲ့အမျှ ပေးဆပ်မှုတွေ ပိုများပြားလာသလို ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုတောင် ထိခိုက်နစ်နာစေတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တစ်စုံတစ်ခုကို မိမိရယူလိုက်တိုင်းမှာ ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့အရာတစ်ခု ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ ။ —
“သမီး… မေမေတို့မွေးထားတဲ့ကမာကောင်ရဲ့ကိုယ်ထဲကို အလုပ်သမားတွေက သဲတွေထည့်ပေးလိုက်ချိန်မှာ ကမာကောင်တွေဟာ အရမ်းအနေရခက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် သဲတွေကိုထွေးထုတ်ပစ်ဖို့လည်း သူတို့မှာအင်အားမရှိကြဘူး။ ဒါကြောင့် ကမာကောင်တွေဟာ လူတွေကို အပြစ်ဆိုညည်းညူပြီး ကိုယ့်နေ့ရက်ကို စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ဖြတ်သန်းမလား..? ဒါမှမဟုတ် အဲဒီသဲကို ကိုယ်နဲ့အတူပေါင်းစပ်ပြီး ကိုယ့်အသွေးတူ၊ အရည်တူဖြစ်အောင်လုပ်မလားဆိုတဲ့ လမ်းနှစ်ခုကိုရွေးကြရတယ်။
“Karl Paul Reinhold Niebuhr” ရဲ့ဆုတောင်းကျမ်းစာထဲက စာသားတစ်ခုက….
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဝေးဆုံး အကွာအဝေးဆိုတာ
နင့်ဘေးမှာ ငါရှိရက်နဲ့ ငါချစ်တာကို နင်မသိတာပါပဲ။
နင့်ဘေးမှာ ငါရှိရက်နဲ့ ငါချစ်တာကိုနင်မသိတာ မဟုတ်ဘူး။
နှစ်ယောက်စလုံး ချစ်ရက်နဲ့ အတူမနေကြရတာပါပဲ။
နှစ်ယောက်စလုံး ချစ်ရက်နဲ့အတူမနေကြရတာ မဟုတ်ဘူး။
ချစ်နေ လွမ်းနေရက်နဲ့ စိတ်မဝင်စားသလို ဟန်ဆောင်နေတာပါပဲ။
ချစ်နေ လွမ်းနေရက်နဲ့ စိတ်မဝင်စားသလို ဟန်ဆောင်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
အေးစက်တဲ့အသည်းနှလုံးနဲ့ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့လူကို ဥပေက္ခာပြုလိုက်တာပါပဲ။ (တဂိုး)